နမဝငေတွိုငွးပှညကွ အလှူရှငွ ရနကွုနွ??? ဓာတခွှဲခနွးအတှကတွဈရကလွှငွ လူ၁၄၀၀ ကှောစွဈဆေးနိုငတွဲ့ ဓာတခွှဲစမွးသပစွကလွှူဒါနွးလိုကတွဲ့ A.A Medical Products Co Ltd မိသားစု ငှကပွှေ ၈၃၅, ၂၀၀,၀၀၀ တနဘွိုးရှိ NHL ဓါတခွှဲခနွး အဆငွ့မှငွ့တငခွှငွးလုပငွနွးမှားဆောငရွှကရွနစွကကွရိ ယာမှားလှူဒါနွးခဲ့ပါတယွ။ဦးဇောမွိုးခိုငွ + Dr စောနနှယမွေိသားစုပါ။ ခရိုနီစာရငြးမပေါကပြမယြေ့ အခွို့အခွို့ ခရိုနီတှထကြေ မှနမြှတပြါပတယြေ ။ အတိုငြးအထကအြလှနပြါပဲ။ …
သခငျကိုဒဏျရာရအောငျလုပျပွီအပွုံးလေးနဲ့လာခြော့တဲ့ကွောငျလေး ဒီတဈခေါကျဖျောပွမဲ့ ကွောငျလေးကတော့ သခငျ့အပျေါ အရမျးဆိုးတယျလို့ပွောရမှာပါပဲ ။ အကွောငျးကတော့ သခငျဖွဈသူနဲ့ အတူဆော့ကစားနတေုနျး သခငျ့ရဲ့မကျြနှာလှလှလေးပျေါကို ကွီးမားတဲ့ ဒဏျရာဒဏျခကျြဖွဈအောငျ ကုတျခွဈပဈခဲ့တာပါပဲ ။ သခငျဖွဈသူမှာလညျး အရောငျးစာရေးတဈယောကျဖွဈနလေို့ မကျြနှာပျေါက ဒဏျရာတှအေမာရှကျကနျြခဲ့မှာကိုကွောကျနပွေီး အလုပျသှားတိုငျး အခကျအခဲဖွဈနခေဲ့တာပါ ။ တဈခါတဈလေ သခငျဖွဈသူက အလုပျထှကျရမလားဆိုတဲ့အထိ အတှေးဝငျနခေဲ့တာပါပဲ ။ ဒါကိုကွောငျလေးက သူအပွဈလုပျထားမှနျးသိလို့ သူ့အပျေါစိတျဆိုးဒေါသထှကျနတေဲ့ သခငျကို …
ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ကိုဗစ်အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေကြောင်း အခြေခံပညာဦးစီးဌာနပြော
ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ကိုဗစ်အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေကြောင်း အခြေခံပညာဦးစီးဌာနပြော နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂။ ယာယီပိတ်ထားရသည့် အခြေခံပညာကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းရဲ့ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ဒုတိယလှိုင်းအနေနဲ့ မြင့်တက်လာသည့်အခြေအနေကြောင့် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းများကို သြဂုတ်လအတွင်းမှစတင်ကာ ပြန်လည်ပိတ်လိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ “အိမ်မှာ အလဟဿမဖြစ်အောင် ကလေးတွေကို …
သံဃာတျောတှေ မွငျတာနဲ့ မွပေျေါမှာ ထိုငျလို့ ဦးခကြနျတော့ကွတဲ့ မွို့လေး ဓမ်မစကူးလျကွောငျးတှဟော ကလေးတှကေိုသာမက လူကွီးလူလတျ ပိုငျးတှကေိုပါ ယဉျကွေးလိမျမာသိမျမှစေ့တေယျဆိုတာ ဒီဖဈရပျလေးက သကျသပေါ. ဘုနျးဘုနျးတှတေ့ာနဲ့ မွပေျေါထိုငျခြ ဦးခကွနျတော့ကွတဲ့ မွို့လအေကွော ငျးမသိသေးရငျ အောကျမှာ ဖတျကွညျ့ပါနျောတောဘုနျးကွီးကလေးမွို့ထဲကို ဝငျလိုကျတာနှငျ့ ပထမဆုံးတှရေ့တာက မှကှေီးေ ပျါ ကကြွ နနထိုငျပွီး ရှိခိုးကနျတော့နကွေတဲ့ ပုံရိပျတှပေါပဲ။ခုအခွိနျထိ ရောကျခဲ့သမြှနရောတှထေဲမှာ မတှေ့ဖူးသေးတဲ့ …
“မိနျးမ တျောတျောမောနလေားဟငျ။ တျောတျောကွာ ကားရောကျလာတော့မှာပါ။ အဲ့ကရြငျတော့ ဆေးရုံသှားလို့ရပွီလေ။” အနညျးငယျတုနျယငျနပွေီး အဆုံးသတျကြ အားလြော့စှာဖြော့တော့သှားသော ထိုစကားသံကို ကွားလိုကျရခြိနျတှငျ ဖွတျလြှောကျနသေောကြှနျတော့ခွထေောကျမြား တုံ့ဆိုငျးသှားခဲ့သညျ။ နရောက နပွေညျတျောတပျကုနျးဂိတျ။ မိသားစုရှိရာ နပွေညျတျောသို့ ပွနျလာသညျမို့ ကှာရတငျးဝငျရနျ လာချေါမညျ့ကားကို စောငျ့ဆိုငျးနသေညျ့အခြိနျ။ အထကျပါစကားကို တိုးညငျးစှာကွားလိုကျရခွငျးဖွဈသညျ။ အကငျြ့ရနသေောမကျြလုံးက ဖတျြခနဲကွညျ့လိုကျမိသညျနှငျ့ လူနာအခွကေို ကြှနျတျောသဘောပေါကျမိသှားသညျ။ ဆံပငျတို့ပွောငျရှငျးနပွေီး ပါးလနြသေောခန်ဓာ မဲညဈခွောကျသှနေ့သေော …
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် မြေနေရာအကျယ်ကြီးကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့သူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်းဘဲ မြေအကျယ်ကြီးကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းသို့လှူဒါန်းခဲ့တာ လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ယခု ပုံလေးတွေကို အမှတ်မထင် ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလျှင်တော့ မြန်မာပြည်ထဲက ဒေသတစ်ခုမှာလို့ ထင်မှတ်မှားစရာပါနော်။တကယ့် နေရာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ ချစ်တကောင်းတိုင်းဒေသအတွင်းရှိ ဘန်ဒါဘန်ခရိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဒေသရဲ့ မြေပိုင်ရှင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သော မစ္စတာမာဘူဘာရဲ့ …
ယခုဖေါ်ပြမည့် ထီပေါက်ကိန်းတွက် နည်းလေးအတိုင်း ထီ ဆုကြီးပေါက်သူ အချို့ရဲ့ မွေးဖွားသော သက္ကရာဇ်များ မွေးနေ့နံများ ထီပေါက်သော နှစ်များကို လက်တွေ့စစ် ဆေးကြည့်ရာတွင် ထူးခြားစွာတိုက် ဆိုင်နေသည်ကို သိခဲ့ရပါသည်.. အထူးသိထား ရမှာကတာ့ ထီပေါက်ကိန်း ကြုံသူတိုင်း ထီပေါက်ဖို့ မသေချာပေမဲ့ ထီပေါက် သူတော်တော် များများက တော့ဖြင့် ထီပေါက်ကိန်းနှစ်နဲ့ တိုက်ဆိုင် တူညီနေ တတ်ပါသည်.. …
ကျိုက္ခမီ ရေလယ်ဘုရားမှာ မျက်လုံးတော်ပွင့်တော်မူ ဖူးမြော်နိုင်ဖို့ မျှဝေပါတယ်
ကျိုက္ခမီ ရေလယ်ဘုရားမှာ မျက်လုံးတော်ပွင့်တော်မူ ဖူးမြော်နိုင်ဖို့ မျှဝေပါတယ် ကျိုက္ခမီဘုရားမှာ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက္ခမီမြို့၏အနောက်ဖက် ပင်လယ်ကမ်းခြေမှ တစ်ဖါလုံခန့် ဝေးကွာသောကျွန်းပေါ်တွင် ကိန်းဝပ်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်… ရုပ်ပွားတော်မှာ မြတ်စွာဘုရားသခင် ထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေ နေတော်မူသည့်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်တော် ၂ တောင်ခန့်ရှိ၍ နဂါးမင်းက ပါးပျဉ်းဖြင့် အုပ်မိုးပူဇော်နေဟန် ထုလုပ်ထားတာပါ…..ရုပ်ပွားတော် စံပယ်တော်မူရာ ကျောက်ဆောင်တွင် ပစ္စယံသဖွယ် အဆင့် ၂ ဆင့်ရှိပါတယ်အပေါ်ဆင့်တွင် အရံရုပ်ပွားတော်၈ …
မောငျနှမတှဆေိုတာက မတညျ့အတူနဆေိုသလို အခငျြးခငျြးရနျဖွဈစကားမြားကရြငျလညျး ခဏအကွာမှာတော့ ပွနျပွီးတညျ့နကွေပါပွီ ။ ကိုယျ့ရဲ့ဘဝတဈလြှောကျလုံးမှာ အမွဲအတူရှိနကွေတဲ့သူတှကေ မောငျနှမတှပေါပဲ ၊ ဒါကွောငျ့ မောငျနှမ ၊ မိသားစု ဆိုတဲ့အရာကို မွတျနိုးတနျဖိုးထားကွရမှာပါ ။ ဒီတဈခေါကျမှာလညျး တရုတျနိုငျငံမှာရပေနျးစားနခေဲ့တဲ့ video တဈခုမှာဆိုရငျ အသကျ 96 နှဈအရှယျ အဘှားအို နှငျ့ 101 နှဈအရှယျအဘိုးအိုတို့အကွာ မောငျနှမသံယောဇဉျဘယျလောကျထိခိုငျမာနလေဲဆိုတာကို တှရှေိ့ရမှာပါ …